Waldaan Qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa Imala Jireenyaa Adeemsise – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Waldaan Qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa Imala Jireenyaa Adeemsise
Warquu Baqqalaa (Wiirtuu Adaamaatti Kutaa Miidiyaa)
Imalli jireenyaa Waldaa Qulqullootaa wiirtuu Adaamaan qophaa’e Bitootessa 11 bara 2008, imaltoota kumaafi dhibba lama hirmaachisuun adeemsifameera. Imalichi gara Mana Kiristaanaa Qulqulluu Abuna Gabra Manfas Qiddus Girabbaa Jawweetti taasifame. Sagantaaleen imala jireenyaa hawwatoo ta’aniifi seera mana kiristaanaa eegan Faarfannaan, lallabni wangeelaa, gaaffiif deebiin dhimma yeroofi seenaa Mana Kiristaanaa irratti xiyyeeffatan, barsiisota hubannoo gahaa qabaniin deebiin itti kennameera.
Imalli jireenyaa waldaa qulqullootaan qophaa’u kun imaltootni waa’ee jiruu foonii qofa yaaduu osoo hin ta’in dhimma jireenya jireenya caaluu,waa’ee lubbuu isaanii akka yaadaniif imalichaan barumsa amantaafi suga Waaqayyoorraa akka argataniif yaadameeti. Imalli jireenyaa wiirtuu Adaamaan qophaa’e kunis dhimmoota kanneen qabachuun ka’uumsa isaa Mana Kiristaanaa Iyyasuus Magaalaa Adaamaatti argamu irraa taasifachuun adeemsifameera. Sagantichi eebba Abboottiin erga eegalamee faarfannaafi ergaa garagaraan booda barumsi wangeelaa D/n Daani’eel Kibratiin mata duree “KIRISTAANUMMAA ERGAMA QABU” jedhuun dhiyaateera. Barbaachisummaan barumsichaa kiristaanummaan nama kamuutuu hojiidhaan calaqqisuu akka qabu hubachiisuu yoo ta’u,kiristaanummaan hojii hin qabne kan du’e ta’uu hubachiisuudha. D/n Daani’eel Mana Kiristaanaa keessatti amantoonni tokko tokko maqaaf kiristaana jedhamurraan kan hafe hojii kiristaanaa tokko irraa eegaman akka kadhachuu, soomuu, sagaduu, arjoomuu, kennaa qabaniin tajaajilu, walumaagalatti waa’ee Mana Kiristaanaa raawwachaa akka hin jirre barsiisaniiru.
Kun immoo diinota Mana Kiristaanaa isaan keessaafi alaaf ummata kiristaanaa saaxiluun salphumatti akka amantaan gufatan taasisaa waan jiruuf,kiristaanni kamuu kennaa Waaqayyoon akka dandeetti isaatti kenneef gargaaramuun dhiiraafi dhalaa osoo hin jedhin carraa argateen waa’ee amantii yaaduu,barsiisuu, deegaruufi hojiilee biroon calaqisisuu qaba jedhaniiru. Kana ta’uu baannan amantii du’e waan ta’uuf Waaqayyoodhaan ni gaafatamna jedhaniiru. Kanaaf, kiristaanummaan akka carraafi barsiifataan osoo hin ta’in kiristaanummaa ergama qabu qabaachuun barbaachisaadha jedhan.
Sagantaa imala jireenyaa wiirtuu Adaamaan qophaa’e kana irratti gaaffileen waa’ee Kitaabolii dhalatoo (Awaldi) ,giloobilaayizeeshinii,seenaa Mana Kiristaanaa Itiyoophiyaa, Tahaadisoofi rakkoolee Mana Kiristaanaa yeroo duriifi ammaa jedhu waltajicharraa dhiyaachuun D/n Daani’eelfi Barsiisaa Yaaregaal Abagaaziin deebiin itti kennameera. Kitaabonni dhalatoon abboottii Mana Kiristaanaan kan qoratamuun adda bahanii beekaman yoo ta’u, bu’uurri isaanii Kitaaba Qulqulluu waan ta’eef bu’aan isaanii kan afuuraa qofa osoo hin ta’in beekumsa Addunyaa kanaaf fayyadan hedduu kan qaban ta’uu himaniiru. Kitaaba Qulqulluu irrattis iddoon macaafotni kunneen akka hin barbaachifne itti katabame hin jiru jedhaniiru. Seenaa Itiyoophiyaa keessatti Manni Kiristaanaa Ortoodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa walabummaa biyya kanaaf, lakkoofsa baraa, afaan biyyaattiin, nagaa biyyattiif kadhachuun oolmaa guddaa akka qabaattu wantoota ishee taasisan keessaa muraasa jedhan.
Dhimma Tahaadisoofi dhiibbaa Mana Kiristaanaa irratti taasifamaniin wal-qabatee rakkoolee manni kiristaanaa keessaa darbaa dhufte waan ta’eef haaraa miti jedhan. Garaagarummaan jiru abboottiin keenya ciminaan hojii amantaa hojachuun injifatan. Dhaloonni har’aas barumsa amantaa cimee barachuu,kadhannaa taasisu, Mana Kiristaanaaf waardiyyaa ta’uun barbaachisaadha jedhaniiru.
Walitti qabaan Waldaa Qulqullootaa wiirtuu Adaamaa Barsiisaa Geetinnat hojiileen waldichi hojatu bal’aa ta’uu kaasuun ummatni kiristaanaa kamuu ogummaa qabuun hojii Mana Kiristaanaaf waldicha maddii akka dhaabbatu gaafataniiru.
Milkaa’ina imala jireenyaa taasifameefis qaamolee deeggaran galateefataniiru.Hojii ijaarsa Mana Kiristaanaa Giraabbaa Jawwee Abuna Gabra Manfas Qiddus deegaruuf Qarshii 27,462 walitti qabuun arjoomameera. Hirmaattonni imala kanaas saganticharraa hubannoo gaarii kan argatan ta’uu himuun gara fuulduraattis cimee akka itti fufu gaafataniiru. Jiraatonni naannoo sanaas sagantichi isaan biratti qophaa’uun miira jajjabinaa kan itti uume,oddeeffannoo Mana Kiristaanaa haaraa kan itti argannee, kiristaanummaa keenyaan akka boonnuufi mana kiristaanaa cimsinee akka eegganuuf kan nu kakaaseedha jedhaniiru.
GALATNI WAAQAYYOOF HAA TA’U!!!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-03-30 08:10:312018-10-26 09:21:11Waldaan Qulqullootaa Wiirtuu Adaamaa Imala Jireenyaa Adeemsise
Matsaaguu DABRA ZAYIT